I Ayenze Europe Okuhlangenwe ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > I Ayenze Europe Okuhlangenwe ngu zemininingwane
IYurophu izwekazi elimangalisayo uku ukuhlola! Njengoba sinezinto eziningi kangaka ukubona, ukwenza bese bethola, kungcono indawo ephelele ukuhlela engapheli, Europe ahlangabezane ngesitimela.
IYUROPHU nakho ngesitimela – FIRST STOP, London:
Enye i-Yurophu nakho ngesitimela kufanele uqale ucime London! It wathi “Usuku olubi eLondon lusengcono kunosuku oluhle kwenye indawo.” Ngakho, asiqale lapho! Okumelwe nakanjani uyenze iyona Harry Potter Tour ka-Warner Bros. Studio ngisho noma ungeyena super-fan. I ubuchwepheshe, amamodeli ngemuva-the-izigcawu kukhona nje amazing kanye Asizisoli kokubona. Kuleli spellbinding 6 uhambo lwamahora angu, bheka amasethi original ezifana Ipulatifomu 9 ¾ futhi Diagon Alley; bheka Hogwarts Express umusi isitimela; ukugibela Broomstick like ukhonkolo, futhi embule izimfihlo ezingemuva-the-izigcawu we movie 'ekuskrini wizardry. Lokhu Harry Potter studio London uhambo kuhlanganisa Umqeqeshi nokubuya ezokuthutha namathikithi yokungena Funda kabanzi mayelana London Harry Potter Uhambo Warner Bros. Studio nge Ukwamukelwa lapha.
PARIS: YITHI YEBO’ Kumculi odweba isithombe sakho
oluzayo Europe nakho lakho ngesitimela kufanele kube Paris. Ngokuhamba kwesikhathi Picasso sika, Montmartre eyayiyipharadesi bohemian egcwele izimbobo ikakhulu ukuphuza wokudonsa amanzi egqumeni yaphenduka umdanso ihholo raffish. Namuhla, iNdawo du Tertre e emthunzini Sacre Coeur ugcwele abaculi ngeke owakujabulela uthwebule ngomfanekiso wakho. Ngemva kwalokho, vakashela edume kunazo art studio emhlabeni, isikebhe Lavoire, lapho Picasso zaveza Braque, Juan gri ngendlela, futhi Modigliani bebahlala.
Ukukhuphuka isitebhisi sokuphumelela IYUROPHU YAKHO ENGAKUFUNDA ngesitimela nazo THE imilingo MONTJUIC:
Ngemva yakho uhambo ngesitimela kusukela Paris, elilandelayo Yurobhu Okuhlangenwe yakho nge zemininingwane kufanele kube Barcelona. Manje, ngaphambi kokuthi uqale ake ukuqhuba indlela ukusho leli dolobha ngokuvamile mispronounced. Izikhulumi eziningi English uzame uzwakale ‘ngaphezulu Spanish‘ by othi 'c’ e Barcelona njengoba 'th’ futhi ethi ‘UBar-the-lona’. Kodwa Catalan (ulimi Catalonia, lapho Barcelona iyatholakala), le 'c’ uphinyiswa njengenhlangano ka-’ – ngakho 'Bar-up ngendwangu’ iyona efanele yokubiza amagama.
SesineHholo ukuthi aphume ngendlela, asikhulume Montjuïc entabeni. Lena indawo ephelele ukungcebeleka esinezimila nge langa ukubukwa. Qiniseka ukuthi uthola ekuhambeni kwakho (noma egijima uma uthanda) nezicathulo, njengoba kwenzeka uthathe kancane legwork ukuze uthole lapho, kodwa lokhu kusho ukuthi ngaphansi aminyene ngamanye izivakashi. Ngaphandle ezizungeze yemvelo kanye vistas umbukwane, uzothola izakhiwo kusukela 1992 Imidlalo yama-Olympic, kuhlanganise Palau Sant Jordi nombhoshongo wezokuxhumana oklanywe nguSantiago Calatrava.
Prague: Ukungcebeleka UKUQHUTSHWA A BRIDGE Medieval EKUSHONENI kwelanga
EPrague is njengoba elaseYurophu eyaziwa. Lokhu amahle kancane ongaqondakali idolobha uyisidingo bheka ku-Europe yakho Okuhlangenwe ngu zemininingwane uhambo. Ngekhulu le-14 uCharles Ibhuloho awele uMfula Vltava ne ngobuningi omkhulu we 1000-castle ubudala Kuphakama ngemva kwaso. fun Eqinisweni; Kuze 1841, kwaba indlela kuphela ukuwela umfula kusukela Old Town!
umnikelo ukubukwa lwasemaphusheni, izitezi kuphela gothic itshe ibhuloho uphahlwe 30 eziqoshiwe labangcwele engcono wavakashela kusihlwa ekuseni lapho Ilanga seliya ngomutsha. uma ukhona nge ephawulekayo nezinye wakho, lokhu kwenza ukuba romantic kakhulu kulungiselelwa.
Venice: THOLA KU ngalesi sikebhe!
Lokhu kungase kubonakale nokunjengoshizi, kodwa uma uya Venice, ugibele Gondola phakathi komuzi ngempela kumelwe. Ngaphandle nje kokuthi kwakumnandi yothando, kungcono futhi indlela engcono kakhulu ukuba abone umuzi! Usuku kufanele iphele off ngokuvakashela Ibha stylish Harry sokuba Bellini ukuvuselela. Lena ezimhlophe peach ijusi Prosecco, lapho cocktail yasungulwa ngo umsunguli ibha sika.
Asia nase-Europe yethu nakho ngesitimela iyona YIWAPHI Istanbul
Istanbul idume le Blue Mosque. Ngenkathi senza batusa lokhu, singathanda futhi ukunaka i-Istanbul isemaphethelweni okuhlangenwe nakho kwe-Europe ngesitimela, njengoba eduze layo Asia kuka-Europe.
Istanbul akuyona kuphela elithakazelisayo ngaphezu komhlaba, kodwa futhi komhlaba nge Basilica Emgodini (Basilica). Le piece enkulu engineering WaseByzantium kuyinto umoya ukuthatha emthonjeni komhlaba, ngokuletha kanye namanzi okuphuza imisele yamanzi nezindawo eziyisikhumbuzo eBulgaria zamanje ukuba Istanbul. Cabanga ukukhanya efudumele, futhi umsindo amanzi ziconsa ezithambile kuhambisana classic edlala ngemuva. Nyathela endaweni yokuhambahamba kanye ukubukela bhukuda izinhlanzi phakathi 336 amakholomu ukusekela ophahleni.
Iya ku SaveATrain.com ukubhuka okulandelayo isitimela adventure yakho 3 amaminithi, ngesikhathi eshibhe ithikithi isitimela amazinga.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-experiences-by-train%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
ithiphu yesitimela amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelfrance travelitaly uhambo lokuhamba igalikuni